China 5T flake milina gilasy sy mpamatsy | Herbin Ice Systems
Masinina misy ranomandry 5T
Masinina misy ranomandry 5T / andro amin'ny fanaovana flakes gilasy 5 taonina isan'andro, ao anatin'ny 24 ora.
Manome milina ranomandry flakes 5T / andro izahay. Kalitao avo lenta miaraka amin'ny antoka 2 taona. Manokan-tena amin'ny milina ranomandry isika nanomboka ny taona 2009, ary mandrakotra ny ankamaroan'ny tsena eropeana sy amerikanina ny masininay. Izahay dia manantena ny hanompo anao amin'ny haitao misy ranomandry flakes miorina sy mahavonjy herinaratra.
1. ranomandry vita amin'ny milina fanala flakes 5T / andro.
Ny sisin-dranomandry vita amin'ny masinin-tsakay dia mivaingana miaraka amin'ny fampisehoana mangatsiaka tsara indrindra. Mavo sy maina ny sombin-dranomandry.
Manodidina ny 5 taonina ny sakelidran'ny ranomandry avo lenta toy izany dia azo atao isan'andro ao anatin'ny 24 ora, ary izany fahafaha-mamokatra isan'andro izany dia miankina amin'ny mari-pana manodidina ny 30C, ny mari-pana rano 20C miditra.
Ny haben'ny hatevin'ny ranomandry dia eo anelanelan'ny 1.5-2.3mm. Ary ny hatevin'ny ranomandry dia azo ovaina.
Ny flakes gilasy toy izany dia ampiasaina betsaka amin'ny trondro mangatsiaka, mitazona ny fihinanana sakafo vaovao, fanodinana sakafo, fampangatsiahana beton, amin'ny icing trondro, fampiasana simika sns.
Masinina misy ranomandry flakes mitahiry hetra maitso no anaovan'izy ireo, ary 75KWH fotsiny ny fanjifana herinaratra amin'ny fanaovana flakes isaky ny 1 taonina.
2. pitsopitsony ny Masinina misy ranomandry 5T / andro.
Ny fahafahan'ny masinina ranomandry 5T / andro dia miankina amin'ny mari-pana manodidina ny 30C sy ny mari-pana rano 20C. Miaraka amin'izany toe-javatra iasana mahazatra izany dia afaka mamoaka flakes gilasy 5 taonina isan'andro izy ao anatin'ny 24 ora.
Izy io dia miaraka amin'ny evaporator firaka volafotsy, izay manana fitondra hafanana tsara indrindra. Ny fifanakalozana hafanana eo anelanelan'ny rano sy ny vata fampangatsiahana dia azo atao tsara. Noho io antony io dia tsy mihinana herinaratra 375KWH fotsiny ity milina fanosotra 5T / andro ity noho ny fanaovana flakes ranomandry 5 taonina. Ny milina ranomandry flakes 5T / andro hafa dia mandany herinaratra farafahakeliny 525 KWH amin'ny fanaovana flakes gilasy 5 taonina. Ny fahasamihafana amin'ny fanjifana herinaratra isan'andro dia 150KWH.
Tao anatin'ny 10 taona, ny herinaratra dia 547500 KWH herinaratra. Manisa izahay amin'ny alàlan'ny fampiasana 150x365x10 = 547500.
Safidio ny milina fanosako 5T / andro, handoany kely noho ny faktioran-jiro ianao amin'ny fitsitsiana herinaratra 547500 KWH ao anatin'ny 10 taona.
80% amin'ireo singa ao amin'ilay milina fanosotra 5T / andro no marika malaza iraisampirenena. Ho an'ny compressors dia mifidy eo amin'ny Bitzer, GEA Bock, Frascold, Refcomp, sns. Ho an'ny sambo faneriterena, toy ny mpizara solika, mpandray ranoka sns, dia mifantina an'i Emerson na O & F, izay be mpitia indrindra sy be mpampiasa indrindra amin'ny rafitra fampangatsiahana ambony kalitao. Mandritra izany fotoana izany, valizy Danfoss, mpankafy Ziehl-Abegg, kojakoja herinaratra Schneider, sns dia ampiasaina amin'ny masinin-dranomandry 5T / andro.
Ireto misy sary vitsivitsy amin'ireo singa vitsivitsy sy antsipiriany ao amin'ny milina fanosotra 5T / andro.
3. Parameter ny Masinina misy ranomandry 5T / andro.
1 masontsivana Specs
2 Ny mari-pana mahazatra 30 ℃
3 Ny mari-pana amin'ny rano miditra 20 ℃
4 Loharanon-drano Rano madio
5 Herin'aratra 400V / 4P / 50Hz
6 Toetra miasa Tsara-ventilated
9 Fahaiza-mamokatra isan'andro amin'ny ranomandry Vongan-dranomandry 5 taonina ao anatin'ny 24 ora
10 Fahaiza-mangatsiaka 25.3KW
11 Ny hafanana miakatra Minus 18 ℃ - Minus 20 ℃
12 Sintan'ny ranomandry flake Eo ambany -5 ℃
13 Ny hatevin'ny ranomandry 1.8-2.2mm
14 Fanjifana herinaratra amin'ny fanaovana ranomandry 75KWH amin'ny fanaovana flakes gilasy 1 taonina
15 Noise 78dBA ao anatin'ny 2 metatra
16 Ny herin'ny milina feno 15.625KW Mitsitsy hery !!!
18 Paompy mitaingina rano sy motera mpankafy 1.5 + 0.55 = 2.05KW
19 Fahaiza-mifanakalo hafanana condenser rano 100KW
20 Reducer an'ny mpamaky ranomandry ao amin'ny evaporator 0.55KW
21 Paompy miampita rano ao anaty etona 0.12KW
22 Rafitra fanaraha-maso Programa fanaraha-maso PLC
23 Ny hakitroky ny ranomandry 900 ~ 950kg / m3
24 Ny lanjan'ireo milina ranomandry flake 1500kgs
25 Ny refin'ny masinina fanosotra LxWxH = 2300x1900x1800mm
26 Ny hafa ......
4. Ny sarin'ny zavamaniry misy flakes 5T / andro mahazatra.
Mpanjifa maro no maniry ny misafidy milina ranomandry flakes 5T / andro miasa miaraka amin'ny efitrano ranomandry 3T iray miaraka. Izany ihany koa ny fenitra ho antsika momba ny zavamaniry flake 5T / andro.
Ny milina ranomandry flakes 5T / andro dia miorina ambonin'ny efitrano ranomandry 3T.
Ny efitrano misy ranomandry dia vita amin'ny takelaka voarehitra hafanana miaraka amin'ny hatevin'ny 100mm, ary ny flakes ranomandry dia azo tazomina ao anatiny nefa tsy mitsonika mandritra ny fotoana maharitra. Milatsaka ao anaty efitrano ranomandry ny flakes gilasy.
Ny efitrano misy ranomandry 3T dia afaka mitahiry flakes ranomandry 3 taonina, ary izany dia ampy hitehirizana ireo flakes ranomandry rehetra natao tamin'ny alina tamin'ny alàlan'ny milina ranomandry 5T / andro.
Amin'izany sary izany dia ahitanao tilikambo fihenan'ny rano eo anilan'ny masinina gilasy. Izy io dia ampiasaina amin'ny famoahana ny hafanana amin'ny ambient avy amin'ny rafitry ny ranomandry. Ny tilikambo fanamafisana rano dia soso-kevitra hapetraka amin'ny toerana malalaka, toy ny tampon'ny tranobe, ivelan'ny tranobe sns. Ny rano nangatsiaka natao dia soso-kevitra mafy hiasa amin'ny faritra mafana.
Ny haben'ny efitrano ranomandry dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa.
Ankoatry ny condenser cooing amin'ny rano, azontsika atao koa ny mampita ny milina amin'ny condenser amin'ny rivotra + mpankafy ny rivotra. Ary hamboarinay ny rafitra arakaraka ny maripana avo indrindra sy ambany indrindra an-toerana an'ny mpampiasa.
5. Ny hoavin'ny vokatra sy ny fampiharana ny milina fanosotra 5T / andro.
Ahina sy ranomandry mangatsiaka voadio tsara miaraka amin'ny fampisehoana mangatsiaka tonga lafatra. Ny flakes ranomandry dia azo ampiasaina amin'ny hatsiaka hazan-dranomasina, mitazona ny fihinanana sakafo vaovao, fanodinana sakafo, fampangatsiahana beton, amin'ny icing trondro, fampiasana simika sns.
6. Fandefasana, fandefasana, serivisy ary fiantohana ny milina ranomandry 5T / andro.
Ny kaontenera iray metatra 20 metatra dia mihoatra ny ampy ho an'ny zavamaniry flake 5T / andro feno, ao anatin'izany ny masinina fanosotra 5T / andro, efitrano misy ranomandry, fefy vy hanohanana ilay milina ranomandry sy zanany lahy.
Manolotra serivisy fakan-kevitra an-tserasera maimaim-poana amin'ny androm-piainan'ny masinina izahay. Manolotra singa izahay maimaim-poana amin'ny alàlan'ny DHL raha toa ka misy olana ara-kalitao ao anatin'ny fiantohana ireo singa ao amin'ilay masinina.
Ny fiantohana ny evaporator ranomandry dia 20 taona, mampanantena izahay fa ny evaporator dia tsy misy famoahana entona, tsy misy endrika maloto ao anatin'ny 20 taona.
3 taona dia ho an'ny fiantohana Motors, paompy, bearings, mpankafy, singa elektrika ary faritra mihetsika hafa.
15 taona no antoka ho an'ny sambo fanerena, condenser, compressor, valves sns.
7. FAQ momba ny milina ranomandry flakes 5T / andro.
F: Ohatrinona amin'ny zavamaniry flake 5T / andro?
A: Ny vidin'ny zavamaniry ranomandry 5T / andro dia eo anelanelan'ny USD 13500 sy USD 20000.
Miankina amin'ny lisitry ny singa amin'ilay milina sy ny haben'ny efitrano misy ranomandry ny vidiny. Miorina amin'ny FOB SHENZHEN USD ny vidiny, ary tsy tafiditra ao anatin'izany ny vidin'ny entana. Tokony handoa irery ny entana ny mpanjifa.
F: Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny masinin-tsiranoka misy antsika sy ny milina fanala flakes sinoa hafa?
A: Ny tsy fitoviana lehibe indrindra dia ny teknolojia fitsitsiana herinaratra.
Mampiasa alim-baravarankely Chromed izahay hanamboarana ny evaporator ho an'ny fitarihana hafanana tsara sy mahomby indrindra.
Amin'ny toe-piainana miasa mitovy amin'izany, ny milina famonosako 5T / andro dia mandany herinaratra 375KWH isan'andro, raha milina ranomandry flake hafa kosa mandany farafahakeliny 525KWH isan'andro.
Isan'andro, herinaratra 150KWH no mahasamihafa azy.
Tao anatin'ny 10 taona, 547.500 KWH ny tsy fitovian'ny herinaratra.
Tao anatin'ny 20 taona, herinaratra 1.095.000 KWH ny tsy fitoviana.
Ny vola lany amin'ny famokarana ranomandry lehibe indrindra dia ny herinaratra. Ny lakilen'ny orinasan-dranomandry mahomby sy mahasoa dia ny teknolojia fitsitsiana herinaratra an'ny milina.
Miaraka amin'ny haitao fitsitsiana herinaratra ananako dia azonao atao ny manitatra ny tombom-barotra amin'ny ranomandry amin'ny alàlan'ny fandoavana ny sarany kely amin'ny jiro.
Miaraka amin'ny haitao fitsitsiana herinaratra ananako dia afaka mivarotra ny ranomandry amin'ny vidiny ambany ianao noho ireo mpifaninana aminao, ary afaka mandroaka ny mpifaninana aminao tsy ho lasa tsena ianao.
Inona koa, manana fitaovana fanampiny izahay hanampy anao amin'ny fitsitsiana angovo.
Andao hataontsika hoe mpamonjy herinaratra. Ny onja mandeha amin'ny herinaratra tsy misy ilana azy / tsy miasa dia azo soloina amin'ny fitsitsiana herinaratra, noho izany, afaka mampihena ny fanjifan'ny herin'ny rafitra 5% -8% izy io.
Ny vidin'ny mpamonjy herinaratra dia manomboka amin'ny USD 3000 / set, ary miankina amin'ny herin'ny rafitra napetraka tanteraka.
USD 3000 no vidin'ny mpamonjy herinaratra 5T / andro mpamonjy herinaratra.
Masinina ranomandry flakes 10T / andro
Masinina ranomandry flakes 15T / andro
Masinina misy ranomandry 20T / andro
Masinina ranomandry flakes 25T / andro
Masinina ranomandry flakes 30T / andro
Masinina fanala lehibe kokoa
Previous: Masinina gilasy 0,6T
Manaraka: Masinina misy ranomandry 30T
Masinina ranomandry miendrika 3T
Masinina fanosotra 20T
Masinina misy ranomandry 2T
Masinina misy ranomandry 30T
Milina ranomandry manidina 10T